Poll - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Madaxa News Poll
Review of qiimaha baradhada miiska. Natiijooyinka sahanka ee usbuuca laga bilaabo 5 ilaa 11.04.2022
Gobollada Ruushka, iibinta goosashada baradhada xilli-ciyaareedka 2021 ayaa sii socota, waxaanan si dhow ula soconaa heerka qiimaha badeecadaha ...
Wali ma iibisaa baradhada miiska? Natiijooyinka sahanka qiimaha usbuuca laga bilaabo Maarso 29 ilaa Abriil 4
Akhristeyaasheena waxay ku mashquulsan yihiin diyaarinta xilliga beerista mana haystaan ​​wakhti ay kaga qayb qaataan sahannada. In badan oo ka mid ah dalagyadii soo go'ay sannadkii hore...
Qiimaha baradhada badhtamaha Maarso. Natiijooyinka sahanka cusub
Waxaan sii wadeynaa la socodka heerka iibinta qiimaha jumlada ee baradhada ee gobollada. Warbixintii ugu horeysay ee sahanka halkan sida ay sheegayaan...
Sahanka qiimaha baradhada
ka Victor Kovalev
Saaxiibada qaaliga ah, joornaalka Nidaamka Baradhada ayaa ku martiqaadaya beeralayda baradhada Ruushka inay ka qayb qaataan sahan ku saabsan qiimaha baradhada ee gobollada. Jawaabahaaga...
WAXAAD KA HELI KARTAA BADHAHA!
Mawduuca ugu muhiimsan ee sahanka dayrta dhaqameed ee joornaalka waa natiijada goosashada, tayada iyo tirada dalagga la goostay. Sanadkan waxaan sidoo kale go'aansanay inaan waydiino ...
U fiirso shirkadaha xubnaha ka ah Ururka Baradhada!
Saaxiibada qaaliga ah! Xafiiska Ururka Baradhadu waxa uu helay codsi (warqad ku taariikhaysan Sebtembar 24.09.2021, 81031 No. ТН/21/XNUMX) oo ka timid Adeegga Antimonopoly Federal ee Ruushka si ay u bixiso macluumaad gaar ah oo ku saabsan...
Natiijooyinka sahanka ku saabsan iibsiga bacriminta macdanta ee sarrifka saamiyada
Ururka Baradhada ayaa sameeyay sahan ka mid ah akhristayaasha kanaalka telegram Digest ee majaladda Nidaamka Baradhada, oo u heellan iibsashada bacriminta macdanta ee sarrifka saamiyada. Waxaan kuu soo bandhigeynaa...
Maalinta hal-abuurka "Teknolojiyada baradhada"
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ka soo qaybgasho munaasabadda beeralayda baradhada xirfadlayaasha ah Maalinta Hal-abuurka "Technology Baradhada" ee Luulyo 9 laga bilaabo 10:00 ilaa 17:00 Goobta: ...
Cadadkii ugu dambeeyay ee majaladda "Nidaamka Baradhada" ayaa la soo saaray
Akhristayaasha Sharafta Leh! Waxaan ku xusuusineynaa in shirkadaha beeraha ee ku takhasusay kobcinta baradhada ay heli karaan joornaalkeena bilaash. Si aad isu qorto, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso wax yar ...
Webinar afaraad ee Midowga baradhada "WAA KU ADAG BARASHADA - SI FUDUD LAGA HELO"
Saaxiibbada Sharafta Leh! Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad kaqeybqaadatid webinar-ka afaraad ee Ururka Baradhada "KU DARAN BARASHADA - SAHLAN AAGA", oo dhici doonta ...
Bog 1 laga bilaabo 5 1 2 ... 5 Xiga